Agoonkii hooyadii illaaway, Q8AAD W/Q; C/fitaax Maxamed Xaambe | Laashin iyo Hal-abuur
Agoonkii hooyadii illaaway, Q8AAD W/Q; C/fitaax Maxamed Xaambe
AGOONKII HOOYADII ILLAAWAY Q8AAD
Odawaa oo illintii ka qubatey qoysay korkiisa, intii uu dhagaysanayey Canjalkii uu hooyadi Maansada hadda ka hor ugu duubey, ayaa dib ugu laabtey Taarkii uu kula ballansanaa wiilkii Ceebla ee Guuleed. Odawaa shaki uguma jiro in hooyadii dhimatey laakin markaan wuxuu doonayaa bal in uu dibnaha Guuleed ka maqlo Geerida taasna uu ka dhigto hadalka ugu dambeynta ah ee uu nafta kaga raarido in geeridaasi dhab tahay, Odawaa wuxuu mar walba maanka ku hayey in Guuleed wax badan ka ogyahay xaalkii hooyadii uuna noqon karo haddii ay dhimatey qofka kaliya ee uu isleeyahay wuxu goob joog ka ahaa Iiilkii la dhigey Abyan.
Odawaa Markuu gaaray Taarkii qiyaastiina uu fadhiyey Saacad ama in ku ag dhow ayaa Guuleed asna yimid dhankii kale ee looga yeeray. Is bariidin ka dib Odawaa wuxuu ka codsadey bal in haoyadii iyo halkey ku dambeysay uu Guuleed wax uga sheego haddii uu war iyo wacaal ka hayo. Asagoo aad ula yaaban rumaysa la’na in Odawaa noolaa welibana uu bad qabey intii la baadi goobayey ayuu ku yiri ” Abyan, hooyadaa Allah u naxariisto, anaa wax ka soo xabaaley, qabuuraha Geedi warfaa ayaana lagu aasey” wuxuu intaas u raaciyey kana sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee Abyan soo martay, sakaraadkeedii, silicii iyo saxariirkii ay la kulantay taasoo inta badan ay sabaab u ahayd hiloow daashadey nafteeda oo ay u qabtey madiga kaliya ee ay owlaad ba ka dhashay, wuxuu xusey in ay Odawaa muddo baafineysay xataa BBC-na laga sii daaayey baadi goobkiisa ayna galbatey ayadoon geeri iyo nolol midna ku ogeyn. Wuxuu la wadaagay Geeraar caan ka noqdey geyiga dhan oo ay hooyadi Abyan ka tirisay ilmaha la dhoofinayo iyo dhaxalka laga helo.
Inkasto uu Carigeena
abaar oonya gaajiyo
Arad loogu go’aayo
Amnina aan lagu heysan
Dhirtii eebba ku beerayna
Askaaxooda la qaadey
Abuurkiina la faagey
Aadmigi la dhameeyoo
Ifisa ay la dhacaanoo
Af saartoo ololeysa
Oofaha ay ka galshaan.
Umul dooxna la gaaray
Ubad aanan la dhawrin
Iilku waa ma huraano
Ajalbaanan la seegino
Mawdku kaama asqoobo
Abidkii Amban maayo
Arliga yeysan ka dhoofin.
U adkeysta dhibkiisa
Ilaahay talo saartoo
Isu dhiiba dhammaano
Ibleyskii la irdheeyey
Ka acuudu bileysta.
U adkeysta dhibkiinoo
Abka diinta Islaamka
Ku abaabsha carruurto
Waa in loo aqriyaayo
Anfac looga dhigaa
Ha joogeen Arligoodo
Haw axsaamo falleen
Aabbahood iyo Hooyo.
Haddii ka asqoobo
Aradkiina ka dhoofo
Waa intuu Ambadaayoo
Aayatiin xuma weyniyo
Alab aan la aqooniyo
Sidii uu inankayga
Aragiisa la waayo.
Aflax khayrle ma yaalo
Arla gaallo dhex joogto
Iimaankaa ku daciifo
Ninka aanan adkaynin
Durba waa Ajarmaayoo
ku anqariya dhankiyo
Asal diin islaamkoo
agtiina ha joogeen
Maalintaan U asteeyey
Tallo aan ku aguugey
Inuu Aayo ka raadsho
Yurub Eega ku yaalla
Hollanda U ishaarey
Umad uusan aqoona
Arsaaq uu ka dhex raadshay
Anaa eeda lahaayoo
Waa ilaah Amarkiisiyo
Arrin seegay nafteydii
Agoonkii I ilaaway
Aan lahaa ha ahaado
Mid Asaagii ka roon
Uu ahaa Arageeda
Xaalka aadmiga weeye
Ma iilbuu ku jiraa?
Ma ilaaway nafteyda?
Ma inkaaro kaleetaa
Tolow Oofaha gooystey?
Aqbal baannu ahayn
Eebbe muu ogolaanin
Ma asiibin xaqiiqda
Halkaan Aad is lahaa
Anfaciis ha dambeeye
Af wuxuu ka yiraahdiyo
Oraahdiisa ma waayey.
Shalaay looma ilmeeye
Ilaahbaa la baryaa
Isagaa ah wakiiloo
Addoonkii tala saartana
Ninka eelka dhibaato
Miduun ooda u taalle
Odawaa oo aysan hadda ku cusbeyn in hooyadi ku biirtey uunka Aakhiro ayaa Guuleed weydiiyey bal in ay wax uun kala dardaarantay intii ay noolayd. Guuleed ayaa ku war celiyey “ waxaa jirta Deyn aan sidaas u badneyn oo lagu laha, ayna codsatey in aad ka bixiso, haddiiba lagu helo”Wax badan oo la is waydaarsadey ka dib waa is nabadgelyeeyeen wuxuuna Odawaa sheegay in uu deyntaas bixin doono si dhaqsi ah na uu u, soo diri doono.
Odawaa dhowr bil oo uusan qolkiisa dhaafin kuna jirey murugo iyo in uu naftiisa hiifo ka dib, waxaa u yimid saaxiibadiisii ay baashaal wadaagga ahaayeen waxayna ku guulaysteen in ay dib u saaraan doontii tumashada iyo tamashleynta ee u horseedday caasinimada ayagoo u daliishadey in uusan waxba ka baddali karin wixii dhacay qof dhintayna uusan naf ku soo celi karin, waxa la gudboon oo kaliyana ay tahay inuu horey uga socdo.
Odawaa ma jeclayn inuu ku sii dhex nagaado falalkii uu ka dhaxlay fool xumada maanta uu faraha ku hayo, lakiin waxaa naftiisa hareeyey oo harqiyey quus, niyad jab iyo is necbaysi uu asagu is dhibsadey. Weli waxaa ka hor muuqda dhibkii hooyadii la soo martay iyo dayacaada uu ku sameeyey hooyadi oo wiil iyo gabar kale toona lahayn nolasheeda dhanna ku soo koobtay korintiisa. waa mar xeero iyo fandhaal kala dhaceen hiifitaanka naftiisa halna u soo kordhi maayo maanta.
Odawaa wuxuu haatan qabatimey maandooriyaasha nuuca ugu halista badan wuxuuna ee loo yaqaan XASHIISH, wuxuuna iska dhaadhiciyey in ay ilaawsiin karaan dhibta iyo dhaawacii ka soo gaaray dhacdadii hooyadii Abayn, laakin waa hoog iyo halis uu naftiisa sii galinayo mase ku baraarugsana. Mar haddii uu noloshii ka dhacay shaqo iyo waxbarashana ay kala baadiyoobeen waxay dani ku kaliftey in uu si nolashiisa ku maareeyo. wuxuu billaabey in uu iibiyo maandooriyaasha halista ah sida Xashiishka, waxa uuna qeyb ka noqdey shabakado isku xiran oo dunida u kala gooshiya kana ganacsada maandooriyaasha inta badan dunida aan laga ogoleyn laakiin si qarsoodi ah loo iibiyo.
Odawaa oo ahaa wiil aad u da’ yar ayaa waxaa jeclaatey haweeney ka mid ahayd kuwa ugu sareeya shabakadda muddana ku soo jirtey howshaas. haweeneydu waa mid da’ ahaan aad uga weyn Odawaa laakin markii ayu kuur gashay xaaladda odawaa oo asagu dhibaato dhaqaale iyo mid kaleba haysay waxay is tustey in ay ka faa’iideysan karto, maadama ay ayadu ay haysatay dhaqaalo badan oo ay ka samaysay Maandooriyaasha. waxaa kaloo jirtey ujeeddo ah in ay ku shaqaysan karto una adeegsan karto in uu kala qeyb qaato kala gudbinta daroogooyinka.